लकडाउनको समय इन्टरनेटमा के गर्दैछन् नेपाली ? « TechPana | Digging into Tech
शनिबार, चैत्र २९, २०७६ १२:५६
लकडाउनको समय इन्टरनेटमा के गर्दैछन् नेपाली ?
काठमाडौं । कोरोनभाइरस (कोभिड–१९) कारण विगत करीब तीन सातादेखि देश लकडाउनमा छ । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले घरबाट बाहिर निस्किन समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपालमा लकडाउन सुरु भएपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक २५ प्रतिशले बढेको छ भने लोकल ट्राफिक ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ ।
धेरै ब्याण्डविथ खपत हुने दोस्रो माध्यम फेसबुक रहेको छ । लकडाउनको समयमा फेसबुकमा खपत हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथ १७ प्रतिशतले बढेर १०५ जीबीपीएस पुगेको छ । जुन लकडाउन अघि ९० जीबीपीएसको हाराहारीमा मात्रै रहेको थियो ।
नेपालमा लोकल ब्याण्डविथ कूल ११५२ जीबीपीएस ब्याण्डविथ खपत हुने गरेकोमा लकडाउन पश्चात ४०१ जीबीपीएसले बढेर १५ सय ५३ जीबीपीएस पुगेको छ ।